လူငယ် နှင့် စိတ်ဖိစီးမှု - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / လူငယ် နှင့် စိတ်ဖိစီးမှု
10:39:00 pm Myanmar Spirit
ယနေ့ခေတ် ၂၁ ရာစု လူသားတွေဟာ Stress ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ တော်တော် ရင်းနှီးကြပါတယ်။ နေ့စဉ် အိမ်မှာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ လမ်းပေါ်မှာ၊ နေရာတိုင်းမှာလိုလို မိသားစုကိစ္စတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့ Stress တွေကို ကြုံနေကြ ရပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် Stress တွေကို ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ Stress နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် နားလည်သလောက် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ Stress ကို ကျွန်တော်တို့ ကြုံနေကြရပါတယ်။ Stess ဆိုတာ လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာ ပိနေတဲ့ စိတ်ပိုင်း/ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားတစ်ခုပါပဲ။ မည်သည့် ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံမျိုးမဆို တနည်းနည်းနဲ့တော့ ဘဝကို အဆင်ပြေအောင်၊ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် နေထိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ သောက STRESS တွေ ကင်းရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဘာတွေက Stress တွေဖြစ်စေနိုင်လဲ …… ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေကြုံရတဲ့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်မှု နဲ့ ဖိအားတွေ၊ မမျှော်လင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ဆက်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ လုပ်ငန်း ရာထူးနေရာ/အဆင့်အတန်း အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတဲ့ အချက်တွေဟာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ။ အလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကားပိတ်လို့ နောက်ကျတာလည်း Stress တစ်ခုပါပဲ။ အိမ်မှာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှလုပ်နေရတဲ့ အိမ်မှု ကိစ္စတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်မပြေမှုတွေ၊ မိသားစုတွေက ကိုယ့်ကို နားလည်မပေးတာတွေ၊ မိဘက ချူပ်ချယ်လွန်းတာတွေ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေရတဲ့ အချိန်နည်းတာတွေကလည်း Stress တွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ အဆင်မပြေတာ၊ ဥပမာ- အင်တာနက် connection ကျနေလို့ mail တွေအချိန်မီ မပို့နိုင်တာ၊ Loading တက်နေတာကိုကြည့်နေရတာ၊ ဖုန်းမှာ error တက်တာ၊ ကွန်ပြူတာ သုံးလို့ အဆင်မပြေတာ တွေကလည်း စိတ်ကို Stress တွေပေးပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ဝေးနေရတာတွေ၊ ချစ်သူနဲ့ ဝေးနေရတာတွေ၊ အချစ်ရေး အဆင်မပြေတာတွေ၊ အသဲ ကွဲတာတွေ၊ ချစ်သူခြင်း ပဋိပက္ခတွေ၊ နားလည်မှု အလွဲတွေ အစရှိတဲ့ နှလုံးသားရေးရာ ကိစ္စများကလည်း Stress တွေ ရနိုင်ပါတယ်။
Stress တွေ ရှိတိုင်းလည်း မကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ခါမှာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ရုံလောက် Stress တွေဆိုရင် အလုပ်အတွက် တွန်းအားဖြစ်ပြီးတော့ အလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုချင်တာတွေ ရတာတွေ၊ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှု တွေလည်း ရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက်တဲ့ Stress ရဲ့ အတိုင်းအဆ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကိုယ့်က အကောင်းနဲ့ တုန့်ပြန်မလား အဆိုးပုံစံ တုန့်ပြန်မလား ဆိုတာ စိတ်ပိုင်းရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက် နေတဲ့ Stress က ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ ရှိနေလဲ ဆိုတာ သိဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ ဒါမှသာ လိုအပ်သလို စိတ်ရော ရုပ်ပါ ပြောင်းလဲ ကျင့်ကြံပြီး ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။
Stress တွေများလာရင် ဘာတွေ ဖြတ်လာတတ်လဲ ? အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ညည အိပ်မပျော်တတ်တာပါ၊ ပြီးတော့ မစားချင် မသောက်ချင် ဖြစ်တတ်တယ်၊ ကြွက်သားတွေ တင်းတာ၊ ဇက်ကြောတွေ တအားတတ်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ကျောအောင့်တာ၊ အရမ်းပင်ပန်းလွယ်တာ၊ စိုးရိမ်သောက များတာ အစရှိတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါ။ ဒါထက်ပိုပြီး ဒေါသတွေ ခဏခဏ လွယ်လွယ်ကူကူထွက်တာ၊ ဂနာမငြိမ်တာ၊ အစာအိမ်ရောင်တာ၊ အစာအိမ်နာတာ၊ စိတ်နေသဘောထား/ စိတ်နေ စိတ်ထား ပြောင်းလဲလာတာ၊ သွေးပေါင်တက်တာ၊ ဆီးခဏခဏ သွားတာ တွေဖြစ်လာရင်တော့ Stress အတိုင်းအတာ မြင့်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
Stress ရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်တာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အဆိုးဖက်ကို ဦးတည်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို Stress တွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းကြမလဲ ? Stress တွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ အလွန်အကျွံ အရက်သောက်တာ၊ အစားအသောက် များတာ၊ ဆေးလိပ် အလွန်သောက်တာ၊ ပြဿနာတွေကို ရှောင်ပြေးတာ၊ တစ်ဖက်သားကို တိုက်ခိုက်တာ၊ တဖက်သားနဲ့ အငြင်းပွားတာ စတဲ့ ကိစ္စတွေကို အနှောင့်အယှက် ပေးတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စိတ်ဓါတ်မတည်ငြိမ်/ မကြည်လင်တဲ့ အတွက် ဖြေရှင်းရ ခက်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘယ်လို အခြေအနေ၊ ဘယ်လို အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်က Stress ရတတ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုပါတယ်။
Stress တွေကြုံလာတဲ့အခါ အသက်ကို ဝဝ ရှုပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ၊ အနားယူပါ၊ ပန်းချီဆွဲတာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ စတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ တစ်ခုခုကို လုပ်ပါ။ Stress တွေ မကြုံရအောင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ ကိစ္စတွေကို တစ်နေ့ခြင်းအတွက် စာရင်းလုပ်ထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေတာ အချိန်စာရင်းကို သူ့နေရာနဲ့သူ၊ ကိစ္စအလိုက်၊ နေရာအလိုက် တိတိကျကျ သတ်မှတ် ထားပါ။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်စာရင်းကို ကိုယ်တိုင် ပြီးအောင် လုပ်ပါ။ အချိန်စာရင်း သတ်မှတ်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိဖို့၊ သဘာဝကျဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထား ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပါ - ဆိုလိုတာက ကိုယ်က Stress တွေကို မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီ Stress တွေဟာ ဘဝ တိုးတက်ဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ မခံနိုင်လောက်အောင် ခံစားချက်တွေ မွန်းကြပ်လာတဲ့အခါ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြပါ။ လုံးဝ ပြောစရာ လူမရှိတဲ့အခါ စာအုပ်ထဲမှာ ချရေးလိုက်ပါ။
လုပ်ငန်း ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေကို အားမနာတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ၊ တကယ်ကို အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် အားမနာပါနဲ့။ အားနာတတ်လို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို ကတိပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်စကားနဲ့ကို ပိတ်မိပြီး Stress တွေရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စတော်တော် များများကို လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ၊ “ငါလုပ်ရင် ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မွေးမြူပါ။ ဒီနေ့လုပ်လို့ ရတဲ့ကိစ္စကို မနက်ဖြန်ကို မရွှေ့ပါနဲ့၊ ရွှေ့လို့ ရသေရွ့ အလုပ်ကို ရွှေ့နေရင် တကယ် မဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့ အခါ မနိုင်မနင်းနဲ့ Stress တွေ ရတတ် ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဒုက္ခတွေဟာ အတွဲလိုက် ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒုက္ခတွေဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကို ရွေးပြီးလာပေး တာမဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဒုက္ခတွေရှိကြတာကို နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါဆိုရင် အဆိုးတွေ ကြုံတဲ့အခါ ရလာမဲ့ Stress တွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အခက်အခဲ တွေကို တစ်ဆင့်ပြီး တဆင့် ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ ပိုမြင့်တဲ့ တစ်ဆင့်ကို ရောက်လာ ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကို ပြတဲ့ သက်သေတွေပါ။
Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470487776411349:0